Union Minister for International Cooperation U Kyaw Tin receives Secretary-General of ASEAN, informs Myanmar’s readiness to commence repatriation process – Ministry of Foreign Affairs
Union Minister for International Cooperation U Kyaw Tin receives Secretary-General of ASEAN, informs Myanmar’s readiness to commence repatriation process
U Kyaw Tin, Union Minister for International Cooperation, received Dato Lim Jock Hoi, Secretary-General of ASEAN at the Ministry of Foreign Affairs in Nay Pyi Taw at 8:30a.m. on 27 May 2019.
During the meeting, the Union Minister informed the Secretary General of the recent concrete measures taken by the Government of Myanmar to create conducive environment for the repatriation of verified displaced persons and Myanmar’s readiness to commence the repatriation process as soon as possible. They also cordially discussed and exchanged views on the implementation of the recommendations of Preliminary Needs Assessment conducted by the ASEAN Emergency Response and Assessment Team (ASEAN ERAT), formulation of some ASEAN projects to strengthen the capacity of Reception and Transit Centres as well as projects which can help to promote confidence, health, education and development before the commencement of the Comprehensive Needs Assessment and the positive role of ASEAN in facilitating the ongoing efforts of the Government of Myanmar for repatriation, resettlement and development in Rakhine States.
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်က အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်အား လက်ခံတွေ့ဆုံပြီး ပြန်လည်လက်ခံရေးလုပ်ငန်းစဉ်စတင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဆင်သင့်ဖြစ်မှုကို အသိပေးပြောကြား
(၂၇-၅-၂၀၁၉ ရက်၊ နေပြည်တော်)
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်သည် ၂၇-၅-၂၀၁၉ ရက်၊ ဝ၈၃၀ နာရီတွင် အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဒါတိုလင်ကျောက်ဟွိုင်အား နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ နေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်လက်ခံရေးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းများ ဖန်တီးပေးရန် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် အဆင်သင့်ဖြစ်မှု အခြေအနေများကို အသိပေးပြောကြားပြီး အာဆီယံ အရေးပေါ် တုံ့ပြန်ရေးနှင့် ဆန်းစစ်လေ့လာရေးအဖွဲ့ (ASEAN-ERAT) က ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ကနဦးလိုအပ်ချက် ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း (Preliminary Needs Assessment) ၏ အစီရင်ခံစာပါ အကြံပြုချက်များ အကောင်အထည်ဖော်ရေး၊ အလုံးစုံလိုအပ်ချက် ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း (Comprehensive Needs Assessment) မစတင်မီ အာဆီယံက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် စီမံကိန်းများနှင့် ပြန်လည်လက်ခံရေး၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက် အစိုးရ၏ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ချက်များကို အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် အာဆီယံ၏ အပြုသဘောဆောင်သော အခန်းကဏ္ဍများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။